တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် Dhamma Radio v1.0.5 APK (LATEST version)
ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် Dhamma Radio v1.0.5 APK (LATEST version)
စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့ ၂၀၁၃ update ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ရေဒီယိုပါ။ အရမ်းလည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို အင်တာနက်ရှိမှနားထောင်လို့ရမှာဗျ။ အားသာချက်က ဖုန်းကို Root လုပ်ထားစရာလည်းမလို၊ မြန်မာဖောင့်ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ နောက်ဆုံးထွက် version ကတော့ 1.0.5 ပါ။ ပိုပြီးသိချင်ရင် http://adf.ly/Y2UcZ မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Android version 1.6 နဲ့အထက်ရှိဖို့လိုတယ်နော်...
There are 15 Channels in the application. You can listen, preview all channel at http://adf.ly/Y2Ukx and http://adf.ly/Y2UiY[✔] 100% Free. No ads. at all.
[✔] No need to install Myanmar (Burmese) Zawgyi-One font.